Teknụzụ mmemme IMEX Champions site na Mmekọ Ihe OmumeMB ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Teknụzụ mmemme IMEX Champions site na Mmekọ Ihe OmumeMB ọhụrụ
IMEX na EventMB
EventMB abụrụla aha IMEX's Official Tech Media Partner. Mmekọrịta ogologo afọ ahụ gụnyere nnọkọ mmụta na IMEX America yana akụkọ gbasara ọnọdụ dị omimi nke na-enyocha odida obodo nke ihe ọhụrụ, imewe ihe omume na teknụzụ na-agbanwe agbanwe.
Ezubere maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-ahazi ụlọ ọrụ, klaasị na-eme atụmatụ mmemme ga-enye ụzọ bara uru maka atụmatụ, ire ahịa na nnyefe nke mmemme.
A ga-eji ihe ọmụmụ ikpe yana mgbanwe nke omume kacha mma.
Akụkọ na-emekarị na-esote afọ a nke ga-enyocha njikọ aka obodo site na ụwa mebere nke teknụzụ 3D na VR.
Mmekọrịta IMEX Group na nnukwu obodo ndị na-eme atụmatụ mmemme n'ụwa niile na-amalite na IMEX America, emere na Nọvemba 9-11, na mmụta mmekọrịta. EventMB Event Innovation Lab™ na-ewere ọnọdụ na Smart Mọnde, nke MPI kwadoro, IMEX America zuru ụbọchị agụmakwụkwọ efu na-ewere ọnọdụ ụbọchị tupu ihe ngosi na November 8.
Ezubere maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-ahazi ụlọ ọrụ, ihe omume na-eme atụmatụ masterclass ga-enye ụzọ dị irè maka atụmatụ, ire ahịa, na nnyefe ihe omume, na-eji ọmụmụ ihe na mgbanwe nke omume kacha mma.
Akụkọ na-emekarị na-esote afọ a nke ga-enyocha njikọ aka obodo site na ụwa mebere nke teknụzụ 3D na VR. Akuko a ga-akọwapụta otu teknụzụ mebere na agwakọta eziokwu siri na-emebi ihe mgbochi nke otu obodo na-esi etinye aka na otu esi etinye nke a n'ọrụ n'ụdị niile.
Carina Bauer, onye isi otu IMEX Group, kwuru, sị: “Anyị maara na mpaghara teknụzụ etolitela nke ukwuu kemgbe ọrịa a. Ihe omume tech obodo nwere ihe ọhụrụ n'obi ya na atọrọ ka ọ rụọ ọrụ dị mkpa na mgbake na ịmaliteghachi mpaghara ihe omume azụmahịa. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na EventMB iji kesaa omume kacha mma ma kwado ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eme ebili mmiri na ụlọ ọrụ anyị. "
Miguel Neves, onye nchịkọta akụkọ ihe omume EventMB na-agbakwụnye, sị: “Mmekọrịta na IMEX bụ ihe dabara adaba maka EventMB. Anyị abụọ na-enwe mmasị miri emi banyere ụlọ ọrụ mmemme ma na-ekerịta mmasị maka imepụta ihe ọhụrụ. IMEX ka ogologo oge na-azụlite ihe omume tech ngalaba, gụnyere inyere startups banye ahịa, ihe EventMB na mbụ egwuri a akụkụ na. Ọ dị mma ugbu a formalize anyị mmekorita na-aghọ IMEX si Official Tech Media Partner. M na-atụ anya ịrụkọ ọrụ ọnụ na ụzọ iji merie teknụzụ na-akwado ụlọ ọrụ anyị na-akpali akpali. "
IMEX America na-eme Nọvemba 9-11 na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8. Ịdebanye aha-n'efu-pịa Ebe a. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara azụmahịa ụlọ na akwụkwọ, pịa Ebe a.